Wednesday January 13, 2021 - 11:08:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Rabshado ay dad badan ku dhinteen ayaa markale dib ugasoo cusboonaaday deegaanno dhaca bartamaha iyo Galbeedka wadanka Itoobiya.
Wararka ka imaanaya gobolka Bineshanghuul ayaa sheegaya in iska hor'imaadyo cusub oo dhaxmaray laba qowmiyadood ay gallaafteen nolosha tobanaan ruux Itoobiyaan ah.
Saraakiil katirsan xukuumadda Xabashida ayaa xaqiijiyay in iska hor'imaadyo shalay dhacay ay ku dhinteen dad ka badan 70 ruux tobaneeyo kalane ay dhaawacyo soo gaareen.
Dagaalka ugu khasaaraha badan ayaa maleeshiyaad Amxaara ah iyo kuwa kasoo jeeda Binshenghuul ku dhaxmaray mandiqadda Metekel halkaas oo ay ku dhinteen 60 ruux sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin Itoobiyaan ah.
Iska hor'imaadyada oo daba socda xasuuq bishii lasoo dhaafay galbeedka Itoobiya ka dhacay ayaa la sheegay in ay ku faafeen deegaanno dhowr ah oo kulaala xuduudda ay wadaagan ismaamullada Amhara iyo Benishanghuul.
Weerar kale oo isna ka dhacay mandiqadda Konso ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 9 ruux iyo dhaawaca toban kale, maleeshiyaad aad u hubaysan ayaa gubay oo dab qabadsiiyay dhowr tuulo oo ka dhacay aagga loo yaqaan Konso oo si aad ah ay ugu loolamayaan maleeshiyo beeleedyo hubaysan.
Sawirro lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinayay holac ka baxaya tuulooyinka lagubay oo weerar daran kala kulmay maleeshiyo qaab beeleed u abaabulan.
Dalka Itoobiya tan iyo sanaddii 2018 waxaa ka dhacayay dagaallo laayaan ah oo udhaxeeya qowmiyadaha kala diimaha iyo kala dhaqanka ah, colaaddan waxay sii hurtay markii uu Abiy Axmed talada lawareegay islamarkaana uu dagaalka ku iclaamiyay qowmiyadda Amxaarada.
Dhinaca kale Xukuumadda Addis Ababa ayaa eedaymo iyo digniin udiray dowladda Suudaan oo ku aaddan xiisadaha ka aloosan deegaannada xuduudda dhaca.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in melleteriga Suudaan ay bishii lasoo dhaafay duullaan ku qaaday gudaha dalka Itoobiya ayna qabsadeen deegaanno dhowr ah.
Isagoo hadlayay ayuu yiri "Itoobiya waxay aaminsantahay in wadaxaajood lagu xalliyo murunka xuduudda balse hanaanka deganaanta ah waa in uusan isku bedelin cabsi, melleteriga Suudaan waxay qabsadeen dhulka Itoobiya leedahay".
wuxuu intaas ku daray in ay xaqiijin karaan qabsashada melleteriga Suudaan dhul katirsan dalka Itoobiya wuxuuna ka digay in iyaga uu sabarku ka dhamaan doono.
Xukuumadda Abiy ayaa ku cataawday in Suudaan ay kaga faa'iidaysatay mashquulka ay ku mashquulsantahay arrinta colaadda Tigreega ayna ka qabsatay dhul istiraatiiji ah.
Sidoo kale dowladda Suudaan ayaa ku eedaysay Itoobiya in diyaaradaheeda dagaalka ay duqeymo ka geysteen xuduudda ayna halkaas ku dileen dad shacab ah.
Xiisadaha udhaxeeya labada dal ayaa cirka iskusii sheereeraya waxaana la arkayaa Itoobiya oo boqolaal askari iyo qalab melleteri ku daad guraynaysa deegaannada xuduudda kulaala.